बिहेपछि किन माेटाउछन् युवतीहरु ? यस्ताे छ कारण ! – ramechhapkhabar.com
हरेक युवतीहरु बिहेअघि स्लिम रहनका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयासहरु गर्छन् । स्लिम रहनका लागि नै खानपानमा विशेष ध्यान दिने गर्छन् । तर बिहे पश्चात विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् जसका कारण युवतीहरु मोटाउने गर्दछन् । मोटो भएका कारण नै उनीहरु विभिन्न समस्याबाट ग्रसित हुने गर्छन् ।
यस्ताे छ बिहेपछि युवतीहरु मोटाउनुको कारण :
– बिहेपछि बाहिर घुम्न जाने र बाहिरको खानेकुरा धेरै खान रुचाउने र बाहिर खाना खाँदा ध्यान नदिनु -बिहे भएलगत्तै फ्यामिली प्लानिङ गर्ने र गर्भवती भएपछि आफ्नो जिम्मेवारीका कारण शरीरलाई कम ध्यान दिनाले । -बिहेपछि युवतीहरुमा धेरै जिम्मेवारी थपिने हुनाले उनीहरुमा स्ट्रेस्स् ज्यादा हुन्छ । जसका कारण धेरै भोक लाग्ने र खानपिनमा धेरै ध्यान नदिनाले ।
-बिहेपछि युवतीहरुमा धेरै इमोसनल र हर्मोनमा परिवर्तन आउने गर्छ । जसले गर्दा पनि शरीरमा एकाएक परिवर्तन आउँछ । -बिहेपछि धेरै जिम्मेवारीका कारणले धेरै समय सुत्न नपाउने भएका कारण पनि युवतीहरुमा मोटोपनको समस्या देखिन्छ ।
धेरै केरा सेवन गर्नु घातक
केरा सबैको लोकप्रिय फलफूलमा पर्छ । केरा खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छ । केरा स्वादिष्ट हुनुका साथै पौष्टिक तत्वले पनि भरपुर हुन्छ ।
तर, केरा धेरै खाँदा यसले नकारात्मक असर पनि पार्छ ।
-केराको अत्यधिक सेवनले माइग्रेनको समस्या झन् बढाउँछ । केरामा पाइने Tyramine नामक तत्वले माइग्रेनको दुखाई झन् बढाउँछ । -केरामा पोटाशियमको मात्रा अधिक हुन्छ । यसको धेरै सेवन गर्दा रगतमा पोटाशियमको मात्रा बढ्छ । जसको कारण हाइपरकेलेमिया नामक रोग लाग्न सक्छ ।
-केही व्यक्तिहरुका लागि केराको सेवन हृदयघातको कारण पनि बन्न सक्छ । केरामा -स्टार्चको मात्रा धेरै हुने भएकाले यसले दाँतलाई पनि असर गर्छ ।
-कसैलाई केराको धेरै सेवनले एलर्जी हुन सक्छ । यदि कसैलाई केराको कारण एलर्जी हुने समस्या छ भने डाक्टरको सल्लाह लिन आवश्यक छ । -केरा धेरै खाँदा तौल बढ्ने समस्या पनि पैदा हुन्छ । तौल कम गर्ने योजनामा हुने व्यक्तिले केराको सेवन गर्न हुँदैन । -एसिडिटी र कब्जियत हुने समस्या भएका व्यक्तिहरुले केराको सेवन गर्नुहुँदेन । यसले ग्यासको समस्या बढाउँछ । -केरामा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुने भएकाले धेरै सेवन गर्दा मांसपेशी कमजोर हुने खतरा बढ्छ ।